Ururka Gabdhaha Aqoonyahanada Soomaaliyeed oo Deeq gaarsiiyay Gabdho Agoon ah | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ururka Gabdhaha Aqoonyahanada Soomaaliyeed oo Deeq gaarsiiyay Gabdho Agoon ah
Ururka Gabdhaha Aqoonyahanada Soomaaliyeed oo Deeq gaarsiiyay Gabdho Agoon ah
Muqdisho (SONNA) Ururka Gabdhaha Aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Ugaaso oo ay ku mideysan yihiin gabdhaha wax ka bartay Jaamacadaha kala duwan ee dalka ayaa deeqdan raashinka ah gaarsiiyey gabdhaha kujira Xarunta Xanaanada Gabdhaha Agoonta Soomaaliyeed ee degmada Boondheere.
Xamdi Maxamed Cali Guddoomiyaha Ururka Ugaaso ayaa sheegtay in deeqdan ay ugu talo galeen gabdhaha Agoonta ah oo xiligan u baahan garab istaag iyo in lala socdo noloshooda.
Maamulaha Xarunta Xanaanada Gabdhaha Agoonta Soomaaliyeed Nuurto Maxamed Cadow ayaa muujisay in deeqdan raashinka ah ay ka turjumeyso doorka gabdhaha Aqoonyahanada ah ay ku leeyihiin u sama falka dadka mudan in la caawiyo oo agoontu ay ugu horeeyaan.
Ururka Gabdhaha Aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Ugaaso ayaa ka shaqeeya sare u qaadista iyo horumarinta gabdhaha, caawinta dadka danta yar iyo sameynta Barnaamijka ka qeyb qaadanaya horumarinta Waxbarashada.
Previous articleRa’iisul wasaare Khayre oo mushaarkiisa wax ku bari doono 100 arday
Next articleAgaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada oo Xilka la Wareegay